प्राकृतिक कपाल हटाउने समाधान - प्राविधिक जानकारी - शेन्ज़ेन कुनै स्मार्ट स्मार्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
प्राकृतिक कपाल हटाउने समाधान
समय: 2019-11-06 हिट्स: 146
आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणहरूको धेरै फाइदाहरू हाम्रो अघिल्लो लेखहरूमा उल्लेख गरिएको छ, आज, शेन्जेन नोबलले तपाईंलाई केहि प्राकृतिक कपाल हटाउने समाधान देखाउनेछ।
शरीरको कपाल छिटो पछाडि बढ्नबाट रोक्न केहि तरिकाहरू छन्। केही पुरुष र महिलाहरू केहि अनावश्यक शरीरको कपाल हटाउन चाहन्छन्। यो स्थायी नहुन सक्छ, तर तपाईं लामो समयको लागि शरीरबाट अनावश्यक शरीरको कपाल राख्न सक्नुहुन्छ।
१. बायोटिनको साथ पूरक आहारबाट बच्नुहोस्। के तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले पूरक लिनुहुन्छ? यसमा बायोटिन छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि तपाईंको पूरकहरू जाँच गर्नुहोस्। बायोटिन एक पानी घुलनशील भिटामिन बी हो जुन हामी सबैलाई हाम्रो आहारमा चाहिन्छ। हामी सबै खानेकुरा मार्फत बायोटिनको केही फारम पाउँछौं। हाम्रो आहारमा धेरै बायोटिनले कपाल छिटो बढ्न अनुमति दिँदछ।
तपाईंले आफ्नो आहारबाट सबै बायोटिन हटाउनु हुँदैन। यदि तपाईं बायोटिनको लागि केही पूरक आहार लिइरहनुभएको छ भने, यसले कसरी शरीरमा कपाल अचानक चाँडो बढ्दैछ भनेर वर्णन गर्न सक्दछ।
२) तपाईंको खानामा थप एस्ट्रोजेन पाउनुहोस्। महिलालाई एस्ट्रोजेन चाहिन्छ, तर पुरुषहरूका लागि मलाई लाग्दैन कि तपाईंले आफ्नो आहारमा महिला हार्मोनको अधिक लिनको लागि मार्गबाट ​​बाहिर जानु पर्छ। कम इस्ट्रोजेन स्तर भएका महिलाहरू बढी शरीरको कपाल बढ्ने खतरामा पर्दछन्। तपाईंको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस् कि तपाईंले एस्ट्रोजेन सप्लीमेन्ट लिनुपर्दछ कि हुँदैन।
सावधान रहनुहोस्, यद्यपि, तपाइँ तपाइँको खानामा धेरै एस्ट्रोजेन चाहनुहुन्न। धेरै उच्च स्तरको एस्ट्रोजेन ट्युमरको सम्भावित वृद्धिसँग जोडिएको छ, विशेष गरी स्तन क्यान्सरमा। त्यसैले एक वैद्य चिकित्सक परामर्श बिना आफैले एस्ट्रोजेन पूरक लिनुहोस्।
)) हल्दी प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। त्यहाँ केहि अनुमानहरू छन् कि हल्दीले शरीरको कपालको वृद्धि रोक्न मद्दत गर्दछ। तपाईलाई १/२ कप शुद्ध हल्दीको आवाश्यक हुन्छ, आधा १/3 भागको साथ मिसिन्छ। केही पानीमा मिश्रण गर्नुहोस्। धेरै धेरै होइन, सायद एक चम्मच। टाँस्न मात्र पर्याप्त छ। शरीरको स्थानहरूमा लागू गर्नुहोस् जुन तपाईं शरीरको कपाल हटाउन चाहनुहुन्छ। यसलाई लगभग -1-१० मिनेटको लागि छोड्नुहोस्। हल्दीले कुनै जलन पैदा गर्नु हुँदैन किनभने यो एक शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ छ।
पछि नुहाउनुहोस्। हल्दीको कर्कुमिनले तपाईंको छाला पहेंलो हुन सक्छ, त्यसैले तपाईंले नुहाउनु पर्छ। यस प्रक्रियालाई हप्तामा कम्तिमा -4--5 पटक दोहोर्याउनुहोस्। केही महिना भित्र तपाईले कपाल ढिलो पछाडि बढेको याद गर्न सक्नुहुन्छ।
डाक्टरहरूले समेत स्वीकारे कि हल्दीले कपालको कपाल बनावट तोडेर विकास रोक्न सक्छ।
)) शरीर Waxing। शरीरको कपाललाई छिटो पछाडि बढ्नबाट रोक्नको निम्ति यो सस्तो र उत्तम तरिका हो। शरीरको वाक्सिंगले कपाललाई जराबाट हटाउँदछ। छाला मुनि सम्पूर्ण जरा फालिएको छ। शरीरको कपाललाई छिटो पछाडि बढ्नबाट रोक्न यो उत्तम प्राकृतिक तरीका हो। केहीले २ महिना सम्म कपाल बढ्नबाट रोक्न सक्दछन्।
सबै भन्दा राम्रो पक्ष के तपाईं आफ्नो मोम पातलो कपाल फिर्ता बढ्न अधिक छ। मलाई थाहा छ यो केहि को लागी कोशिश गर्न को लागी एक धेरै पीडादायी हुन सक्छ, तर यो एक प्रमाणित विधि हो जसले वास्तवमै काम गर्दछ।
माथि उल्लेखित प्राकृतिक कपाल हटाउने समाधानहरू बाहेक, यहाँ अर्को प्रभावकारी, पीडारहित र सुरक्षा विधि सिफारिश गर्दछ — घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणको प्रयोग गरेर। शेन्जेन नोबलको घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण मानव शरीर मैकेनिक्स को सिद्धान्त पुष्टि, यसको मूल्य उचित छ, एक पटक खरीद, जीवनकाल उपयोग, तपाईं यो पाउन योग्य।
अघिल्लो: मा घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण पेशेवरहरू र विपक्षमा
अर्को: के आईपीएल कपाल हटाउने काम गर्दछ?